Ihe Ndị Na-eme n’Ụwa | Teta! Mach-Eprel 2014
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bengali Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Nepali Norwegian Oromo Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Otu akwụkwọ akụkọ a na-ebipụta n’Amerịka kwuru na ihe onye onye na-aṅụ sịga na-arụrụ ọrụ na-emefu n’isi ya kwa afọ bụ ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ otu narị puku naịra. Nchọpụta e mere n’otu mahadum dị n’obodo ahụ gosiri na otú e si emefu ego ahụ bụ mgbe onye ahụ hapụrụ ọrụ ya gawa ise sịga, ego a na-akwụ ma ọ gaa ịgwọ ọrịa sịga kpataara ya nakwa oge ọ na-abịaghị ọrụ. Onye ahụ agaghị na-arụ ọrụ otú o kwesịrị. Ọ bụrụ na ọ chọọ ịkwụsị ise sịga, ọrịa ọ ga-akpatara ya nwekwara ike ime ka ọ kwụsị ọrụ ọtụtụ ụbọchị.
Poopu Francis sịrị na ndị ụka na ndị isi ha bụ soro okwu ọnụ m esola omume m. Otú a ha si akpa àgwà na-eme ka obi ndị mmadụ ghara ịdị n’ụka.
Ndị uwe ojii Maleshia jidere ụgbọ mmiri abụọ si Togo buru osisi na-aga Chaịna. Ihe mere ha ji jide ha bụ na e zoro ọdụ́ enyí n’ụgbọ ndị ahụ. Ọdụ́ enyí ahụ karịrị otu puku. Ndị ọkachamara kwuru na e nwetụbeghị mgbe e jidere ụgbọ mmiri bu ọdụ́ enyí hiri nne ka ndị ahụ ndị Maleshia jidere.
N’afọ 2012, Ngalaba Òtù Mba Ụwa nke Na-ahụ Maka Ahụ́ Ike kwuru na ọtụtụ mmadụ nwụrụ n’Afrịka n’afọ ole na ole na-adịbeghị anya. Ihe gburu ọtụtụ n’ime ha bụ ọrịa o biri n’ájá ọcha, afọ ọsịsa, ịba, ụkwara nta, na ọrịa ndị ọzọ na-arịa ụmụaka.
Ọtụtụ ụmụaka Ọstrelia na-eji ihe a rụnyere n’ekwentị ha agba chaa chaa. Ihe ndị ahụ yiri ezigbote ihe e ji agba chaa chaa. Naanị ihe ha ji dị iche bụ na ha na-adị mfe nrite. Otú ịgba ụdị chaa chaa a si dị njọ mere ndị ọchịchị ji kwuo na e kwesịghị ikwe ka ụmụaka na-agba ya n’ihi na ọ ga-eme ka ịgba chaa chaa rie ha ahụ́ ma ha too.
Ihe Ndị Na-eme n’Ụwa—Mach-Eprel 2014